Maxay Yihiin Nofollow, Dofollow, UGC, ama Iskuxirayaasha La Isboonsar gareeyay? Maxay Sababtu Tahay Muhiim U Noqoshada Qiimeynta Raadinta?
Thursday, April 1, 2021 Jimco, Abriil 2, 2021 Douglas Karr
Maalin kasta sanduuqgeygu wuxuu ku qulqulaa shirkado SEO ah oo been abuur ah kuwaas oo ka baryaya inay xiriiriyaal ka dhigaan waxyaabaha ku jira. Waa codsiyo aan dhammaad lahayn oo runtii iga careysiiya. Waa tan sida e-maylku badanaa u baxo… Gacaliye Martech Zone, Waxaan ogaaday inaad ku qortay maqaalkan cajiibka ah [keyword]. Waxaan sidoo kale ka qornay maqaal faahfaahsan. Waxaan u maleynayaa inay wax weyn ku kordhin doonto maqaalkaaga. Fadlan ii sheeg haddii aad tahay
Tabaha Xeerarka Dhismaha Link-ka ee si layaab leh u shaqeynaya
Suuqgeeyayaasha dijitaalka ahi waxay ku tiirsan yihiin dhismaha isku xidhka oo ah istiraatiijiyad muhiim u ah hagaajinta mashiinka raadinta (SEO) si ay u kordhiyaan darajooyinkooda bogagga bogagga natiijooyinka mashiinka raadinta (SERPs). Iyadoo suuqleyda ay ka shaqeynayaan inay kasbadaan gadaal gadaal iyo inay hagaajiyaan taraafikada goobta, soo saaraan tilmaamo, iyo inay gaaraan ujeedooyin kale, waxay barteen inay u jeestaan ​​dhowr habab oo caan ah oo ku jira sanduuqa ay ku shaqeeyaan. Waa maxay Xiriirinta dhabarka? Xidhiidhka gadaal ee gadaal waa iskuxiraha la riixi karo ee ka socda hal goob oo aad adigu iska leedahay. Raadinta makiinadaha sida
Shirkadaha SEO waxay sii wadaan isku dayga iyo maamulida natiijooyinka mashiinka raadinta… si fudud ma joogsan doonto. Matt Cutts oo ka tirsan Google ayaa qoray qoraal weyn, Burburka iyo dhicitaanka baloog garaynta martida ee SEO waxaa ku jira fiidiyoow ku saabsan istaaggiisa martida martida iyo Matt wuxuu ku siinayaa sidan inuu yahay gunta hoose: Waxaan kaliya doonayaa inaan muujiyo koox tayo sare leh ama spam boggaga waxay ku xirnaayeen "baloogyada martida" sida istiraatiijiyaddooda dhisidda isku xirnaanta, waxaanan aragnaa
Dhammaan Faahfaahinta Aad U Baahan Tahay Inaad Ku Darajootid Suuqgeynta Maxaliga ah ee SEO
Waxaan runtii ku raaxeysaneynay shirkad adeeg guri oo maxalli ah halkan Indianapolis oo waxaan ka shaqeyneynaa dadaalkooda suuq geynta. Inta badan khibradayada ilaa maanta waxay la shaqeynayeen macaamiisha shirkadaha kuwaas oo sidoo kale rajeynayey inay darajayn heer gobol ah waxaanan u furnay xeelado waaweyn oo iyaga u gaar ah. Macaamiilkan gaarka ahi kuma jiro magaalo kale, in kasta oo uu halkan ku haysto hal tartan. Waxaan geynay goob la yaab leh, waxaan dhisnay maktabad ka kooban waxyaabo waaweyn, lana soo saaray